दक्षिण कोरियाले गर्यो आफ्नो देशको पासपोर्ट परिवर्तन, हेरौं कस्तो रहेछ नयाँ पासपोर्ट? – Eps Sathi
दक्षिण कोरियाले गर्यो आफ्नो देशको पासपोर्ट परिवर्तन, हेरौं कस्तो रहेछ नयाँ पासपोर्ट?
December 24, 2021 488
विश्वकै शक्तिशाली पासपोर्टका रुपमा रहेको दक्षिण कोरियाले मंगलबारबाट परिवर्तन गरेको छ। नयाँ पासपोर्टको रङ परिवर्तन हुनुका साथै पहिलेको भन्दा कडा रहेको छ। त्यसैगरी नयाँ पासपोर्टका पेजहरु पुरानोका भन्दा धेरै रहेका छन भने हरेक पेजमा कोरियाका एतिहासिक तथा परम्परागत संस्कृति झल्काउने किसिमले बनाइएको छ।
तर कोरियाको नयाँ पासपोर्टमा कोरियाली नागरिकको रजिष्ट्रेशन नम्बर भने हटाइएको छ। रजिष्ट्रेशन नम्बर नराखिएका कारण नयाँ पासपोर्टलाई कोरियाभित्र आइडिकार्डका रुपमा भने प्रयोग गर्न सम्भब नहुने देखिन्छ। त्यसैगरी नयाँ पासपोर्ट पुरानोभन्दा बढि कडा तथा तातो सहन सक्ने क्षमता रहेको छ।
“पासपोर्टलाई नयाँ डिजाइन दिएर हामी हाम्रा नागरिकहरुको व्यक्तिगत विवरणहरुलाई अझ सुरक्षित बनाउन चाहान्छौं। हामीहरु अहिले कोरोनासँग सँगै जीवनयापन गरिरहेका छौं र खोप लगाईसकेपछि हाम्रो नागरिकहरु अझ धेरै विदेश भ्रमणमा निस्कने अनुमान गरेका छौं।” कोरियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो बिज्ञप्तिमा भनेको छ।
नयाँ पासपोर्टको दुरुपयोग हुने तथा नक्कली बनाउने सम्भावना एकदमै न्यून रहेको छ। पुरानो पासपोर्ट कागजबाट बनेको थियो तर नयाँ पासपोर्ट भने पोलिकार्बोनेट बाट बनेको छ। पोलिकार्बोनेट एक प्रकारको थर्मोप्लाष्टिक हो जुन ताप प्रतिरोधात्मक हुने तथा केहि इलेक्ट्रिक डिभाइसले रिड गर्न सक्ने समेत हुन्छ। यस किसिमको पदार्थ यसअघि पनि केहि क्रेडिट कार्डहरु तथा सरकारले जारी गरेका विभिन्न कार्डहरुमा पनि प्रयोग भइसकेको छ।
पासपोर्टको बाहिरी डिजाइन यस भन्दा पहिले हरियो रङको हुने गरेको भएता पनि अब भने निलो रङको हुनेछ। पासपोर्टको पहिलो पृष्ट सउल नेशनल युनिभर्सिटीका फाइन आर्ट प्रोफेसर किम सु जुङले डिजाइन गरेका हुन। यस पेजमा कोरियाका एतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाका चित्रहरु रहेका छन। १० बर्ष अवधि रहेको नयाँ पासपोर्टका पेज यसअघि ४८ वटा भएकामा अब भने ५८ वटा हुनेछन। त्यसैगरी ५ बर्षका लागि बनाइने पासपोर्टको पेज संख्या यसअघि २४ वटा हुने गरेकामा अब भने २६ वटा हुनेछन।
Prevकोरियाले बिना डिजेल, पेट्रोल, हाइड्रोजन ग्याँसबाटै चल्ने कार्वन रहित हेभि ट्रक सन्चालन गर्दै
Nextदूध सेवन गर्न जापानी प्रधानमन्त्रीले गरे देशवासीलाई आव्हान
ग्रीनलाइफ हाइड्रोको सेयर बाँडफाड भोली, कतिले पाउने भए सेयर? जान्नुस